Qindaa'ina dirqaalaalee maxxaansaa ifteessa.
Deetaa maxxansaa hir'isa
Hanga deetaa maxxaansaatti ergamu hir'isuu dandeessa. Deetaa maxxansaa hir'isuun saffisa maxxansaa dabala sababni isaas faayilootni maxxansaman ni xiqqaatu. Kun maxxansaawwan kuufannoo xiqqoo qabaniif salphisa. Deetaa maxxansaa hir'isuun xiqqoo ishee qulqullina maxxansaa xiqqeessa.
Yoo badhee kana mallatteessite waantonni ifoon akka baratamaatti maxxana, waantonni iftoo hin taane immoo akka filannoo kee qabduulee dirqaalaa lamaan armaan gadiiti.
Iftoominni kallachaan maxxansaatti bahuu hin danda'u. Bal'inni galmee kan iftoomni keessatti mul'atu kanaafuu hogayyuu akka bitmaps shallagamee gara maxxansaa ergama. Hanga bitmaps fi rukkina maxxansaa irratti hundaa'uudhaan deetaan guddaa argamuu danda'a.
Iftoominni hin jiru
Qulqullina maxxansaa guddaa/baratamaa
Waantota ifaa dabali
Halluuwwan gara saxxiillaatti jijjiira
Of eeggannoo maxxansaa
Title is: Dirqaalaalee Maxxansaa